Izindaba - Ungayikhetha kanjani i-grinder yomhlaba yamaplanethi ye-grinder yaphansi
Ukusebenza komshini wokugaya ukhonkolo phansi kufaka phakathi: ukugaya ububanzi, ukugaya imodi yokusebenza kwekhanda, isivinini sokujikeleza, ukugaya iyunithi yengcindezi, ukulawula ivolumu yamanzi, njll.
1. Indawo yokugaya yomshini wokugaya phansi: uma kuqhathaniswa, inkulu indawo yokugaya yomshini, kuyanda kwesakhiwo sendawo yokwakha, kepha futhi kukwanda ebangeni lokugaya elenza ukusebenza kahle kokulinganisa komhlaba umehluko wezinga uphansi.
2. Imodi yokusebenza kwekhanda lokugaya lomshini wokugaya phansi: Lapho imodi yokusebenza kwekhanda lokugaya yomshini iyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kukhula amandla okugaya, amandla okusebenza aphezulu, nokuphakama kokucaca komhlaba. Amandla okugaya ama-way-12-grind head floor grinder aqinile.
3. Ijubane lokuzungezisa kogayi waphansi: Ngokuvamile, lapho liphezulu inani lezinguquko zekhanda lokugaya le-grinder yaphansi, namandla okugaya nawo azokwanda. Kodwa-ke, isivinini esikhulu ngokweqile sizonciphisa amandla okugaya we-abrasive nomhlabathi. Lapho ingcindezi yekhanda lokugaya liphansi kakhulu, kuzonciphisa ukuzinza kokusebenza komshini futhi kunciphise izinga lokwakha.
4. Ukucindezelwa kweyunithi yekhanda lokugaya lomshini wokugaya phansi: ingcindezi yekhanda lokugaya lomshini wokugaya phansi ngisho nesisindo somshini, ingcindezi enkulu yekhanda lokugaya, iyanda ukusebenza kahle kwesihlobo nezinga lokulinganisa . Uma ingcindezi yekhanda lokugaya liphezulu kakhulu, amandla okusika azokwanda lapho umhlaba uthambe kakhulu. Ngalesi sikhathi, i-grinder yaphansi ayikwazi ukugijima ngejubane elifanayo, elizonciphisa ubushelelezi bokwakhiwa.
5. Ukulawulwa kwevolumu yamanzi: Ngokuvamile, ukugaya phansi kuhlukaniswe kwaba ukugaya okumanzi nokugaya okomile, okunquma kakhulu umhlabathi. Amanzi angadlala indima yokuthambisa, ukukhipha i-chip nokupholisa. Ngokushintsha kwenqubo yokugaya umhlabathi onzima wegranite, inani lamanzi kufanele lilawulwe ngesikhathi. Ukushisa okuphansi komhlaba kuzophinde kuthinte ngqo ukukhanya kokupholisha.
Ngokungeniswa kokusebenza komshini wokugaya phansi, ngikholelwa ukuthi wonke umuntu angakuqonda ukusebenza kwengxenye ngayinye yomshini wokugaya phansi futhi kulula ukukhetha umshini wokugaya phansi ohlangabezana kangcono nezidingo zakho.